Xildhibaan Guuleed : Boqolaal Soomaali Ah Baa Dhinta Iyagoo Sugaya Dal Ku Galka Hindiya – Kalfadhi
Xildhibaan Guuleed : Boqolaal Soomaali Ah Baa Dhinta Iyagoo Sugaya Dal Ku Galka Hindiya
Guuleed Cayduruus Cige oo ka mid ah xildhibaannada Golaha Shacabka oo ka hadlayay kulankii 18-aad ee kalfadhiga afaraad oo qayb ka mid ah ajandihiisu ahaa aqrinta 2-aad ee Hindise Sharciyeedka Golaha Mihnadlayaasha Caafimaadka Qaranka ayaa sheegay in dhibaato caafimaad darro oo weyn ay dalka ka jirto.
Waxa uu sheegay dhibaatada caafimaad darro ee ugu weyn ee dalka hadda ka jirtaa ay tahay mid uu sababay cudurka Kansarka.
Sidoo kale waxa uu sheegay in safaaradda dalka Turkigu ay tahay kaliya midda dal ku gal-yada caafimaad siiso dadka dalka wax looga qaban waayo.
Safaaradda Hindiya ee dalka Kenya ayuu sheegay in iyaduna maalinkii qaabisho 140 qof oo Soomaali ah kuwaas oo la ildaran xanuunno kala duwan. Dadkaas qaarkood ayuu sheegay in ay dhintaan iyagoo sugaya dal ku galka Hindiya.
Halkaan ka daawo muuqaalka xildhibaanka
Aqirso Hindise-Sharciyeedka Doorashooyinka Qaranka Ee Qaybada Ah
Wax Ka Baro Howlaha Iyo Xubnaha Guddiga Arrimaha Gudaha Ee Golaha Shacabka